यस मेनुमा सूत्रहरू ढाँचा पार्न आदेशहरू समावेश हुन्छ ।
सूत्र तत्वमा लागू हुने फन्टहरू परिभाषित गर्नुहोस्.
तपाईँको सूत्रका लागि फन्ट साइजहरू निश्चित गर्नका लागि संवाद प्रयोग गर्नुहोस्. सूत्रको आधार साइज र सबै तत्वहरू चयन गर्नुहोस् जुन आधारको सम्बन्धमा मापन गरिन्छ
सूत्र तत्वहरू बीच स्पेसिङ निश्चित गर्नका लागि यो संवाद प्रयोग गर्नुहोस्. आधार साइजसँग सम्बन्धित प्रतिशतको रूपमा स्पेसिङ निश्चित गरिन्छ ढाँचा - फन्ट साइज तल परिभाषित गरिएको.
तपाईँ बहु-पङ्क्ति सूत्रहरूको पङ्क्तिबद्व परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथ एउटा पङ्क्तिमा बिभिन्न तत्वहरूसँगको सूत्रहरू पनि. बहु-पङ्क्ति सूत्रहरू निर्माण गर्नुहोस् NEWLINE आदेश आदेश सञ्झ्यालहरूमा प्रविष्ट गरेर
पाठ मोड सुरु वा बन्द स्विच गर्नुहोस् । पाठ मोडमा, पाठ पङ्क्तिको उचाइ जस्तै सूत्रहरू पनि प्रदर्शन हुन्छ.
This page is: /text/smath/main0105.xhp
Title is: ढाँचाबद्ध गर्नुहोस्